N’Golo Kanté oo wacad ku maray in Manchester City ay ka aarsan doonaan guuldaradii naxdinta lahayd – Gool FM
N’Golo Kanté oo wacad ku maray in Manchester City ay ka aarsan doonaan guuldaradii naxdinta lahayd
(England) 12 Feb 2019. Xidiga khadka dhexe reer France iyo kooxda Chelsea N’Golo Kanté ayaa muujiyay sida uu kaga xun yahay guuldaradii 6-0 ahayd ee ka soo gaartay Manchester City Axadii lasoo dhaafay.
N’Golo Kanté ayaa tan iyo guuldaradii naxdinta lahayd ay kala kulmeen Manchester City, wuxuu markii ugu horeysay la hadlay shabakada rasmiga ah ee kooxda Chelsea wuxuuna yiri:
“Way adag tahay in la sharraxo waxa dhacay, aad ayay inooga sareeyeen, anagana si guud ayaan u fashilanay”.
“Manchester City waxay naga adkaatay isla daqiiqadii ugu horeysay ilaa iyo daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta, waxay sameeyeen farqi aad u weyn, aad ayay u adkeyd in laga soo laabto natiijadan”.
“Aad ayaan u niyadjabsanahay, waana inaan jawaab celinn fiican aan ka bixinaa, way adag tahay inaan aqbalno guuldaradan, lakiin kulamo badan ayaan heysanaa, waxaan sare u qaadi karnaa madaxeena, waxaana rajeyneynaa natiijooyin fiican dhamaadka xilli ciyaareedkan”.
“Dhamaanteen waan niyad jabnay, laakiin wax badan ayaan haysanaa si aan wax uga barano waxa dhacay, waxaan rajeyneynaa inaysan markale dib noogu soo laaban doonin khaladaadkan oo kale mustaqbalka”.
Waxaa xusid mudan in kooxda Chelsea ay markale kula ciyaari doonto Manchester City, 24-ka bishan Febraayo garoonka Wembley finalka koobka Carabao Cup.
Inay joojin doonaan Pogba, sida weyn uu kaga soo hor jeedo isbar-bardhiga isaga iyo Neymar & dhowr arimood uu ka hadlay Julian Draxler